पत्रात्मक निबन्ध – मझेरी डट कम
परदेशी मित्रलाई एउटा चिट्ठी
प्यारो साथी प्रेम तिमीलाई कस्तो छ हँ ? म यहाँ सञ्चै छु तिमी त त्यहाँ गएपछि प्याट्रिक भएछौ अरु साथीहरुले भनेर पो थाह पाएँ । अनि कस्तो पाखे रहेछ हाउ आर यु ? आर यु फाइन ? नभनी आजकल को जमानामा पनि सञ्चै भनेर सोधेको अनि डियर हो को बियर हो नलेखेर प्यारो लेखेको नभन ल तिमीले मलाई राम्रोसँग चिनेका छौ म अङ्ग्रेजी जान्दिन । अँ साँची तिमीले त नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न पनि भुलिसकें भन्छौ रे हो ? हेर न आफूलाई इङ्ग्लिश फिङ्ग्लिश आउदैन नेपालीमै लेख्दै छु, फेरि पाखे मोराले नेपालीमै पो पड्काएछ भनेर पत्र नपढी च्यातेर चैं नाफाल्नु नि है, पढेपछि भने जेसुकै गर ।
August 9, 2019 November 27, 2021
मलाई विश्वास छ, तिमी जहाँ भए पनि उच्च र सम्मानित स्थानमा छौ । आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न कमी गरेका छैनौ होला । तिमी यहाँ रहुन्जेलसम्म मलाई पूरै भरोसा दिएका थियौ । मलाई आधा जिन्दगी होइन तीन चौथाइ हिस्सा ठानेका थियौ ।
Read More »पुनर्विवाह
by Bhupal Guragai
खै के भन्नू तिमीलाइ म ।अपरिपक्क भावको आलसतालस बोकेर हिड्न नि कति हिड्नु?खै मनमा मन मिल्ला भनेर कति बसौं ।नबसौ भन्दा नि नहुने के यो कुनै अखट्ट भन्दा कम छैन।हुन त भावमा अभाव नदेखिदो रहेछ।अभावको भाव फेरि कत्ती गहिरो?शुद्ध पानी मा देखिने सगर झै ।लाग्छ बोलि रहने प्रहर भए?फेरि कुनै पल फरक देख्छु।
अनि फेरि मनमा इन्द्रेणी लाग्छ।
तिमीलाई मैले ३३ वर्षअघि सन् १९८५ को एक रमणिय शरद–साँझमा पहिलोपटक भेटेको थिएँ । घर–परिवारदेखि धेरै टाढा दाङको पुलिस स्कुलको होस्टेलमा बस्ने म एक अर्ध–अनाथ बच्चो थिएँ । त्यो वर्ष दसैँको एकमहिने छुट्टीमा मलाई लिन बुबा आउनुभएको थियो ।
तिमी मेरो जीवनमा नआउँदा म फगत एक्लो थिएँ । जिम्मेवारीबाट पूरै अलग थिएँ । पैतृक सम्पत्ति र संरक्षणमा जीवन हिँडाइरहेको थिएँ । चिन्तामुक्त मनोदशामा सिर्फ लेखपढमा चित्त लगाउँथेँ । थरीथरीका शैक्षिक र वैयक्तिक अनुभव भएका शिक्षकहरू थिए । उनीहरूको छत्रछायाँले दिनहुँ मेरो ज्ञानको जग बलियो हुँदै गइरहेको थियो । विज्ञानको विद्यार्थी हुनाले खोजयात्रामा सरिक हुने अवसर समेत मिलिरहन्थ्यो ।
आज म मनको उकुसमुकुस पोख्न पत्र लेख्दै छु । यसबाट नमीठो अनुभूति महसुस हुन गएमा विनम्रताका साथ क्षमायाचना गर्दछु । यद्यपि आजका नेताले जस्तो कुरा फिर्ता लिन भने रुचाउँदिनँ । साथै, कुराको पोको खोल्न अनुमति चाहन्छु ।
अहिलेको समय साह्रै कलिलो छैन । पहिलेको जस्तो सोझो पनिरहेन । आठ–दश कक्षामा नपुग्दै अहिलेका छोरीहरू पनि सुझबुझसहितका भएर निस्कन्छन् । मानसिकता पाको भए पनि व्यवहार भने उत्ति साह्रो परिपक्व हुँदैन । यद्यपि आफूले गरेको गल्ती भने अनुभूत हुन्छ । मेरो पनि यस बेला ज्ञानको क्षितिज पनि फराकिलो भइरहेको छ ।
प्रिय प्रिन्सिपल महाशय,
आज म देखिएका कुरा लेख्दै छु । संस्थागत हितका दुईचार कुरा बताउँदै छु । हितबेगरका कुरामा समय बर्वाद गर्दिनँ । नोक्सान मात्र हुने नीति म पटक्कै चाहन्न । भन्नु त मनग्यै छ । त्यो तपाईंले पनि बुझ्नुछ । कुरा करेलाझैं तीतो छैन । त्यसले दिने मामचाहिँ पक्कै मीठो छ । पत्र नै किन भन्नुहोला । यसलाई आज के भयो ठान्नुहोला । फोनमा सबैखाले वार्ता हुन्न । यस बारेमा म चाहिँ दोहोरो वार्ता चाहन्नँ । दिएको जिम्मा बेकम्मा नहोस् । म यत्ति चाहन्छु–मेरो मनोकांक्षा तु. को तु. पूरा होओस् ।
यो रू. ५ को टिकट नटाँसेको पत्र सरकारी हुलाकीले तपाईं समक्ष पुर्याई दिन्छन कि दिदैनन् थाहा भएन । र पनि लेख्दैछु ।
केही गर्न नसके पनि सपना देख्नु ठुलो कुरा हो, यो भ्रष्टाचार गर्नु जस्तो गलत कदापि हैन । चुनावमा भोट दिने कुरामा म तपाईको साथमा भए पनि नभए पनि सपना देख्ने कुरामा म तपाईको साथमै छु किनकि म पनि राति राति तपाईले जस्तै अनेकौं सपना देख्ने गर्छु । अस्ति भर्खरै भूकम्पले भत्काएको घर एक दिनमै बनाएको सपना देखे र ढंग पर्दै उठेको त आफूलाई जस्तापाताको छाप्रोमा पो पाए । मेरो गाउँ बुंगमतीमा पुनर्निर्माणको शुभारम्भ गर्न तपाईं आउनु भाको धेरै भाको छैन, यस्तै ४/५ महिना मात्र भो होला । तपाईले सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो काम गरेर कम्तीमा ३०/४० वर्ष भित्र पूरा गर्नुहुन्छ नै भन्ने ठुलो विश्वास छ । तर के थाहा मेलम्चीको एकादेशको कथा जस्तै पो हुने हो कि ।
माध्यमिक छोरीको स्नातकोत्तर पितालाई झापड
श्रद्धेय बुबा !
अब म पनि साह्रै कलिली छैन । सुझबुझसहित काम गर्ने उमेरकी भएँ । उत्ति साह्रो परिपक्व भने भएकी छैन । यद्यपि सोचसमझको विकास हुँदै गएको अनुभूत हुँदै छ । कताकता मेरो ज्ञानको क्षितिज थुन्ने आफ्नै आफन्त भएको महसुस हुँदै छ । र, यत्तिखेर पत्र कोर्न वाध्य भएकी छु । यसलाई सकारात्मकरूपमा लिएर मेरो स्वच्छन्दताको मार्ग अँझ सफा पार्न सहयोग गर्नुहुने छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु ।
सन् २०१२ को मार्च ८ हिजो मात्र थियो र त्यो पनि हिजै सकियो । ठूल्ठूला नेतानेतृ र नीति निर्माताहरूले भव्य मञ्चमा भव्य कुराहरू गरे । ती कुराहरू आलिसान महलका मखमली विस्तारामा बसेर कथिएका थिए । ती उनीहरूकै लागि थिए । तिमी, हामीहरूका लागि थिएनन् । ती अहङ्कारीहरूका ललिपप चटाउने गफ थिए । थिए, ती जुरुक्कै उचाल्ने र छानामा पुर्याउने अनि एकै चोटि फ्यात्त भुइँमै खसाउने खालका !
माया उर्गेनको घोडा चढेर
त्यो घुमाउरो बाटो
मेरो आदिम बस्ती
कुरूप शैक्षिक चिन्तनकी सिकार नानुलाई पत्र
शैक्षिक क्षेत्रमा फैलिएको दुषित चिन्तनकी शिकार भएकी एक छात्राले आत्महत्या गरेको सन्दर्भमा उनैलाई सम्बोधित यो लेख/निबन्ध प्रकाशनयोग्य भए कृपा गर्नुहोला ।
परदेशी छोरीको साष्टांग दण्डवत !
पत्रको सुरुवात आफू निको रहेर, हजुरहरूको आराम, कुशलता र स्वास्थ्यको कामना गर्दै कोर्दैछु !
निश्चिन्त रहनुहोस, आमा यहाँ सबै निको छ, प्रवाशको यो बसाइ जति नै निको र राम्रो भने पनि किन किन यहाँको भूमिले मन जित्न सक्दैन रहेछ, प्रकृति जति नै सुन्दर र आकर्षित भए पनि मन अल्झ्याउन सक्दैन रहेछ, आमा … ।
मलाई थाहा छैन तपाईं किन मसँग रिसाउनु भयो । तपाईं मेरो अहिलेसम्मकै सम्मानित र सच्चा साथी जस्तो लाग्थो मलाई । तर समय परिवर्तनसँगै मानिस पनि त परिवर्तन हुनै पर्ने रहेछ क्यारे । सायद यही भयो होला। सधैं हाँसेर बोल्ने मेरो साथी आज मसँग रिसाएर नबोल्दा कता कता मनमा नराम्रो लगिरहेको छ ।
साथी, मैले तपाईंलाई कुनै समयमा पनि नराम्रो सोचेको छैन र कदापि नराम्रो सोच्न पनि सक्दिन । तपाईं त एकदम निस्वार्थी र सहयोगी हुनुहुन्छ । म तपाईंसँग कसरी रिसाउन सक्छु र ?
प्रिय बेनाम !
–म खुशी छु एकातर्फ, अघोरै दुःखी छु अर्कातिर । दुःख र सुख, आँसु र हाँसो थप्ने तँ को होस् ?
तर, तँ नभई म जीवन अपाङ्ग देख्छु । तेरो मोहनी जालमा फँसेको छु । जब मोहनीले लठ्ठ हुन्छु, जीवनको मज्जा लिन्छु । तैँले लठ्याउन छाडेको बखत मरेतुल्य हुन्छु । तैँले कहिले खुशी पारिस्, कहिले मन अघोरै दुखाइस् । मलाई मात्र हैन सारा जगत्लाई एउटै चक्रमा घुमाइस् । यही सेरोफेरोमा तँलाई कागजमा उतार्दै छु । म तेरो शक्तिलाई लिपिबद्ध गर्दै छु । त्यसैका लागि चिठ्ठी कोर्दै छु ।
यो पाली पनि सँगै चाड बाड मनाउने उद्देश्य अधुरै रहने पक्का भयो ! खुर्किएर बाटोका लेऊ र छेउ छाउका बन्मारा र तितेपाती फाड्दै अनि सप्रिएका निल काँडालाई मुठार्दै हौली । करेसामा लटरम्म फलेका नास्पतीमा एक हुल बेबारीसे काला अरिङ्गाल घुम्दा हुन ! छोरोलाई लपक्कै दसैले ढाकेको होला हरेक साल झै दसै नजिकिदै गर्दा छोरोले मेरो खोजी गर्दो हो ! के गरोस् बाबा को काँधमा बसेर मावल जाने बबुरा को रहर रहरै रहेको छ !! हरेक पटक नयाँ लुगा किनेर ल्याइदिंदा ” बाबाले पठाइदिनुभएको” भनेर ढाँटे जस्तै एक पटक फेरि ढाट्नै पर्ने भयो ! ऊ सानै छ मेरो वास्तविकता बुझ्दैन ! बुझ्ने भए पछि अवश्य मलाई बुझ्ला ! मेरा यी त्याग को सही मूल्याङ्कन गरेर मलाई निर्दोस देख्ला !
माते! खै के लेखुँ यहाँको खबर? ठिक छैन भनुँ भने ठिकै छ। ठिकै छ भनुँ भने बेठिकै बेठिक छ। जीवनमा सपना त धेरै देखियो। सपनाकै हुटहुटीले ‘सपनापथ’का धेरै खाले दोबाटाहरू काटियो। तर, माता! सबै सपना कहा साकार हुदा रहेछन् र?
धेरै भयो तिमीसँग भेट नभएको। कस्तो भयौ, के सोचिरहेका होलाउ भन्ने मनमा लाग्छ।